स्यालको भोज | Nagarik News - Nepal Republic Media
अन्तिम भोज खाइरहेछन्।
कसरी लुछिरहेछन् ।
जसले भाग पायो,
जसले केही पाएन,
हुइयाँहुइयाँ रोइरहेछन् ।
खोई यिनीहरूको घ्याम्पे भुँडी,
चील, ब्वाँसाहरूको पञ्जामा
विवश , असहाय, कराइरहेछ।
लाचार, विनित, विवशताहरू,
अन्तिम लडाइँ लडिरहेछ ।
कल्पवृक्ष भनेर रोपेका बिरुवाहरूमा,
लेन्डुपेका दानाहरू, झुप्पाझुप्पा फलिरहेछ।
तर ऊ हाँसिरहेछ,
खोई यिनीहरूको घ्याम्पे भुँडी
कहिले भरिन्छ ?
एउटाले सय वर्ष चुस्यो
अर्काले चालीस वर्ष चबायो।
बस, सबै सकायो,
उसले सबै पचायो,
अरू दशकौँले, चिथोरे,निचोरे,
भ्याएसम्म बलात्कार गरे
विश्वबजारमै लीलाम गरायो ।
आफ्नै अस्थित्वको बोली लगायो।
तेल मालिस गरिदिन पो नङ्ग्याएको।
लाज पचा निको,आँखामा पट्टी बाँधेर,
घमण्ड र जडसूत्रको बोरा बेरेर
हठी र जिद्दी प्रवृत्तिलाई
दृढताको संज्ञा दिएर,
सर्वाङ्ग स्वाभिमान र अभिमानलाई,
सतरञ्जको गोटीमा साटे
मैले विश्व रङ्गमञ्च जितेको छु।
मैले संघर्षको आवाज बोलेको छु।
प्रतिकारको हतियार उठाएको छु।
इतिहासको साक्षी बनेको छु।
कति गजब छ–
घुम्ने कुर्सीमा बसेको एउटा अन्धो मान्छेले,
अर्जुनदृष्टिको उदाहरण सुझाउँछ।
अन्धो मान्छेलाई के पत्ता
घुम्ने कुर्सीमा घुम्दाघुम्दै,
उत्तर, दक्षिण ,पश्चिम
कुर्सी कता रोकिन्छ।
घुम्दाघुम्दै कुइनेटाहरु कता ठोक्किन्छ।
अरूको बाजामा नाच्दानाच्दै,
अझै केके देखिन्छ?
त्यो घ्याम्पे भुँडीहरू कहिले भरिन्छ?
स्यालहरू यस्तै हुन्,
यसलाई पनि त्यही हड्डी चाहिएको छ,
त्यसलाई पनि त्यही हड्डी चाहिएको छ
स्यालहरूको लुछाचुँडीमा ,
हड्डी तानातानको लडाइँमा,
म भुस्याहा कुकुर
आफ्नै लुतोलाई, सुम्सुम्याउनुमा
कस्ले पो कनाउँछ,
लुतो नै कनाउनमा मजा आउँछ।
हिजो सिनोले नपुगेको स्यालहरूलाई,
आज इम्पोर्टेड होली वाइन चाहिन्छ,
शिवजीको ताण्डव देखेर,
जता पनि बज्ने डम्बरु बनेर,
ताल न सुर,
आफू पनि ,
भुस्याहा कुकुर न परियो।
स्याल कराउँदा किन पो भुकिन्छ?
बरु लुतो कनाउँदै,
न्यानो मानेर सुतिन्छ।
यस्तै हो यहाँ,
मति कहिले पो सुध्रिन्छ
कहिले पो भरिन्छ।
धेरै खायो भने भुँडी पनि पड्किन्छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७७ १२:४५ बुधबार